गाउँले दुःखी जीवन परिवर्तन मेरो एकमात्र उद्देश्य » छलफल
गाउँले दुःखी जीवन परिवर्तन मेरो एकमात्र उद्देश्य
श्याम कार्की, अध्यक्ष, भिमेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
तपाईंको संस्थाको नाम, स्थापना मिति र सञ्चालनका बारेमा बताइदिनुस् न ।
मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था २०५२ साल कार्तिक १५ गते २८ जना सेयर सदस्यबाट स्थापना भएको हो । गाउँमा छरिएर रहेको ससानो पूँजीलाई संकलन गरी सुरक्षित गर्नु, सानातिना व्यवसाय गर्न चाहनेलाई ऋण दिने, विदेश जानेलाई ऋण दिएर समस्या समाधान गर्नु र गाउँलेको दुःखी जीवनलाई परिवर्तन गरी सुखी बनाउने हाम्रो ध्येय थियो । यसमा हामी आंशिक रूपमा सफल पनि भएका छौंं । पहिले पहिले गाउँमा बचत गर्न चाहने व्यक्तिका घरदैलोमै पुगेर सानोतिनो रकम बचत गर्ने कोही थिएनन् यसले गर्दा केही गर्नको लागि गाउँमा पैसाको समस्या हुने, ऋण पाउन गाह्रो हुने, पैसा हुनेहरूको हराउने, चोरी हुने, लुटिने डर भइरहने हुन्थ्यो । यसरी रकम सुरक्षित नहुँदा बचत गर्नेहरू पीडित बन्ने गरेका थिए भने नहुनेहरू ऋण नपाउने समस्याबाट ग्रसित हुन्थे । यो समस्या समाधानका लागि देशैभर यस्ता संस्थाहरू खुलेका हुन् । यसको विकास, विस्तार, हाम्रो योजना, चाहना र जनताको आवश्यकताअनुसार निश्चित साथी सहयोगी मिलेर यो सहकारी हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालय, धुलिखेलमा दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौं । सुरुमा २८ जना सेयर सदस्यको करिब ३ हजार रकम जम्मा भएको थियो । त्यसबाट आज यसको पूँजी बढेर ३७ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ र राम्रै ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । गाउँलेहरूको जीवनमा पनि आर्थिक रूपमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
कुनै सन्दर्भ मिल्यो कि, कुनै घटना परिघटनाले छोयो कि, यसको अध्ययन अनुभवले तान्यो के कारण र परिस्थितिले सहकारी सञ्चालन तर्फ लग्यो ?
म जागिर खाँदै स्थानीय तहको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्दै थिएँ, त्यो बेला मलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर जागिरबाट हटाइयो । त्यसपछि व्यापार व्यवसाय ठेक्कापट्टातिर लागेँ । केही समय पसल पनि चलाएँ । त्यसमा निकै घाटा भयो र छोडेँ । त्यसपछि भीरकोट भाग्य निर्माण कम्पनी दर्ता गरेर ठेक्कापट्टाका काम गरेँ जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । यससँगै गाउँमा छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीलाई एकत्रित गरेर जनताकै हितमा काम गरांै, गाउँले जनताको जीवनमा आमूल आर्थिक परिवर्तन ल्याऔँ भन्ने उद्देश्यले केही साथीहरू मिलेर यो सहकारी सञ्चालन ग¥यौं । तर हामी सहकारीको पूर्ण ज्ञान नभई सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न थालेका हौं । ज्ञान थिएन तर हाम्रो भावना पवित्र थियो । सहकारीकै माध्यमबाट गाउँले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीमा आत्मविश्वास पनि थियो । त्यसैले हामीले सहकारी सिक्न र प्रयोग गर्न कन्जुस्याईँ गरेनौँ । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्मलाई सकेसम्म व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जाँदा नै आजको यो सहकारी बन्न पुगेको हो । हामी मात्रै होइन आज जिल्लाका धेरै सहकारी अभियानमा लागेका सहकारीका शुभचिन्तक र अभियन्ताहरू हाम्रो संस्थाप्रति गर्व गर्छन् । यसले हामीलाई अत्यन्तै खुसी पार्ने गर्छ । दोलखावासीले यो संस्थालाई औधी माया गर्नेे र यसको श्रीवृद्धिमा निरन्तर योगदान गरिरहेका छन् ।
दोलखामा यो संस्थाको प्रभाव कस्तो छ, कत्तिको सबल छ ?
यो संस्था कति सबल र सक्षम छ भन्दा पनि यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वको भएको छ । आज सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय गौण बन्ने गरेको छ किनकि यसको मजबुती, सक्षमता, सुशासन, विश्वसनीयता र दिगोपनामा सदस्य एवम् समुदायले प्रश्न उठाउन छाडेका छन् । त्यो संस्थाप्रति बढेको जनविश्वासको प्रतीक हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । अब यसका सदस्य र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्न सकेको छ अर्थात् समाज परिवर्तनमा यो सहकारीले के कति योगदान गर्न सक्यो ? के गर्दैछ र भविष्यमा के गर्न सक्छ ? भन्ने विषय महत्वको बनेको छ । त्यसैले यो संस्थाका कार्यक्रमहरू सदस्यको जीवनस्तर कसरी सहज र समृद्ध गर्न सकिन्छ ? समाजमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ ? यसको माध्यमबाट गाउँका युवा, युबतिलाई कत्तिको रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कत्तिको योगदान दिन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसैले यो संस्था पनि सबल छ, हामी पनि सबल नै छौं ।
यसले के कसरी के कस्ता काम गर्दै छ त ?
यो संस्थाले डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृतिमा गाँउमा छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी सीमित वित्तीय कारोबार गरिरहेको छ । हामीले भर्खरै प्रदेश सरकारको सहभागितामा साझेदारी कार्यहरू पनि गर्ने भनेर त्यसखालका साझेदारी योजना बनाइरहेका छांै । यसले संस्थाको विश्वसनीयता र जोखिम लिने क्षमता अझै बढाएको छ । कृषिको माध्यमबाट पशुपालक किसानसँग पुगेर उनीहरूको क्षमता विकास र आयस्रोतमा वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छांै । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि ऋण उपलब्ध गराइरहेका छौंं । त्यसबाहेकका साना तिना रोगजार सिर्जना गर्ने आय आर्जनका कामहरूमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । यसका सेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत नाफा उपलब्ध गराइरहेका छौं । अब त्यसलाई बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना बनाइरहेका छौं । सहकारीको आफ्नै भवन बनाइसकेका छौं । पहिले यो निश्चित ४÷५ वटा गाविसमा थियो अहिले जिल्लाभरि नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रा सेयर सदस्य ३ हजार पुगिसकेका छन् । यो ढंगले काम गरिरहेका छौं ।
यसको नीतिमा कुनै समस्या छ ?
अहिलेसम्म छैन, भएको नीतिले काम चलिरहेको छ, तर नीति भनेको समय परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुने कुरा भएकोले समय र आवश्यकताअनुसार फेरबदल हुँदै जानुपर्छ, समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्छ,सहकारीमैत्री बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यसका चुनौती के कस्ता छन ?
चुनौती थुप्रै छन् । गाउँमा पैसाको अभावै हुन्छ, सबैले चाहे जस्तो ऋण पाउँदैनन्, दिन सकिँदैन, पुग्दैन । गाउँलेले चाहे जति ऋण नपाउँदा कतिपय रिसाउँछन्, कतिपयले ऋण लगेर तिर्दैनन्, पैसा डुब्छ, भनेको समयमा पैसा उठाउन सकिँदैन, पैसा उठाउँदा मान्छेले नराम्रो दुष्टिले हेर्ने गर्छन्,गाउँका मान्छेको सोच सानो हुने हुँदा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, जनशक्तिको अभाव हुन्छ ।
के केमा बढी लगानी गर्नुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा बढी गरेका छौं । त्यसबाहेक कृषि र सानातिना उद्योगमा पनि गरिरहेका छौं ।
योजना के छ त ?
संस्थालाई विस्तार गर्दै लाने, अधिकतम पूँजी संकलन गर्ने, सेयर सदस्यहरूलाई अधिकतम नाफा दिने, वित्तीय र गैरवित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने, कृषिजन्य वस्तु र सेवाका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, सहुलियतमा आधारित डिपार्टमेण्टल पसलहरू सञ्चालन गर्ने, गैरवित्तीय कारोबार पनि गर्ने, बाँझा जग्गाको भरपूर उपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, संकलन गर्ने र बजारीकण गर्ने, सरकारसँग पनि साझेदारी गरी स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने र आर्थिक रूपमा जिल्लालाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने एवं गाउँलेको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने हाम्रो योजना छ । यसमा हामी चाँडै सफल पनि हुन्छौं ।
यसको आधार के छ थप के भन्नुहुन्छ ?
यसको मुख्य आधार संस्थाको काम र टिमवर्क हो । अर्को, आगामी दिनमा संस्थाले सदस्य र समुदायको विकास एवम् जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भनेर त्यसको केही खाकाहरू तयार गरिसकेको छ । मलाई विश्वास छ यो संस्थाको अनुभवी र समर्पित टिमले संस्थाले अगाडि ल्याएका सबै योजनालाई विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि सफल बनाउँदै लैजानेछ । हामीलाई माया र सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन् । हामी जिल्लाबाट प्रदेश पुगिसकेका छौं, सरकारलाई साझेदार बनाउन लागेका छौं, कृषिलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । यसका साथै हाम्रो जिल्लामा स्रोत साधन पनि प्रशस्त छ, त्यसलाई राम्ररी उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौं, युुवा लक्षित कार्यक्रमहरू बनाइरहेकाछौं, पूँजी विस्तार गरिरहेका छौं, नयाँ नयाँ योजनाको छनौट गरिरहेका छौं, वित्तीय र गैरवित्तीय कारोबारमा पनि ध्यान दिइरहेका छौं, सेयर सदस्यहरू पनि बढाइरहेका छौं । यिनै हुन् हाम्रा बलिया आधारहरू । अन्तमा मेरा संस्थागत भनाइहरू सबैमा पु¥याइदिनुभयो तपाईंलाई विशेष धन्यवाद । हामीलाई सहयोग गर्ने सबैलाई पनि हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसका साथै नजिकिँदै गरेको महान चाड विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।